Actor - Wikipedia, Njikotá édémédé nke onyobulạ
Onye na-eme ihe nkiri ma ọ bụ onye na-eme ihe nkiri (lee n'okpuru ebe a) bụ onye na-egosipụta àgwà na arụmọrụ. Onye na-eme ihe nkiri na-eme "n'anụ ahụ" na usoro ọdịnala nke ụlọ ihe nkiri ma ọ bụ na mgbasa ozi ọgbara ọhụrụ dị ka ihe nkiri, redio, na telivishọn. Okwu Grik yiri ya bụ ὑποκριτής (hupokritḗs), n'ụzọ nkịtị "onye na-aza". Nkọwa nke onye na-eme ihe nkiri banyere ọrụ—nkà nke ime ihe—metụtara ọrụ a rụrụ, ma ọ̀ dabere n'ụdị mmadụ ma ọ bụ n'akụkọ ifo. A pụkwara iwere nke a dị ka "ọrụ onye na-eme ihe nkiri," nke a na-akpọ nke a n'ihi akwụkwọ mpịakọta ndị a na-eji eme ihe na ụlọ ihe nkiri. Nkọwa na-eme ọbụna mgbe onye na-eme ihe nkiri "na-egwu onwe ya", dị ka n'ụdị ụfọdụ nke ihe ngosi nka
Na mmalite oge mbu, ụka dị na Europe malitere ime ụdị ihe omume Akwụkwọ Nsọ ndị nwere egwu. Ka ọ na-erule n’etiti narị afọ nke 11, ihe nkiri okpukpe esiwo na Rọshịa gbasaa ruo Scandinavia ruo Ịtali. Ememme ndị nzuzu kwadoro mmepe nke ihe ọchị. Na ngwụcha ngwụcha, e mere egwuregwu n'obodo 127. Egwuregwu ndị a na-eme ihe omimi na- enwekarị ihe ọchị, ebe ndị na-eme ihe nkiri na-akpọ ekwensu, ndị ajọ mmadụ, na ndị omekome .  Ọtụtụ ndị na-eme ihe nkiri na egwuregwu ndị a sitere na ndị obodo. Ndị na-eme ihe nkiri na England bụ naanị ụmụ nwoke, mana mba ndị ọzọ nwere ụmụ nwanyị na-eme egwuregwu.
Enwere ọtụtụ egwuregwu ụwa emebere na Middle Ages, nke izizi bụ Play of the Greenwood nke Adam de la Halle dere na 1276. O nwere ihe nkiri satirical na ihe ndị mmadụ dị ka ihe na-eme ihe karịrị mmadụ. Farces bilikwara nke ukwuu na ewu ewu ka narị afọ nke 13 gachara. Na njedebe nke oge ikpeazụ, ndị ọkachamara ọkachamara malitere ịpụta na England na Europe. Richard III na Henry VII abụọ nọgidere na-enwe obere ụlọ ọrụ nke ndị na-eme ihe nkiri. Malite n'etiti narị afọ nke 16, ndị otu Commedia dell'arte rụrụ egwu egwu na-eme ka ọ dị egwu gafee Europe ruo ọtụtụ narị afọ. Commedia dell'arte bụ ụlọ ihe nkiri gbadoro ụkwụ n'ihe nkiri, chọrọ obere ihe nkiri na ihe nkwado ole na ole. Egwuregwu bụ usoro rụrụ arụ nke na-enye ọnọdụ, mgbagwoju anya na nsonaazụ nke omume ahụ, nke ndị na-eme ihe nkiri mebere. Ejije eji agwa ngwaahịa ngwaahịa . Otu ìgwè na-enwekarị ndị otu 13 ruo 14. A na-akwụ ọtụtụ ndị na-eme ihe nkiri ụgwọ òkè nke uru egwuregwu ahụ dabara na nha nke ọrụ ha.
Ewepụtara na https://ig.wikipedia.org/w/index.php?title=Actor&oldid=74346
Ihe nkiri Naịjirịa
Oge ikpeazu Edeziri ihuakwụkwọ a bụ 27 Ọnwa atọ 2022, mgbe 23:32